Nhau - Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye kugadzikana-iko kuitika kwemachira echisikigo muchirimo nemuzhizha ra2022
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nekusimudzira -chimiro chemachira echisikigo muchirimo nemuzhizha ra2022
Kunyangwe hosha nyowani yekorona yakakonzera kumwe kusagadzikana munharaunda, iyo pfungwa yekuchengetedza zvakatipoteredza ichiri tarisiro yevatengi nemhando. Kunzwisisa kwevanhu nezvekuti nharaunda yepasi inokanganisa sei hutano hwevanhu inoramba ichiwedzera, uye kuchengetedzwa kwenzvimbo yatove chinhu chakakosha chinotariswa neveruzhinji. Kune iwo machira emachira indasitiri, maitiro ekuisa pamberi zvigadziriso zvinogadziriswa kubva ku fiber kuenda kumafashoni, shandisa zvakasikwa fibers kudzikisira kukanganisa kune zvakatipoteredza, uye nekuona izere inoteedzwazve yekushandiswazve yekushandisa cheni kuburikidza netekinoroji yedhijitari. Ichave iyo huru yekuvandudza maitiro eiyo mbatya indasitiri mune ramangwana. Naizvozvo, dingindira iri rinotarisa pane organic kotoni fiber, yakasikwa kara donje, inowedzerwazve organic kurima, kudyara kwezvirimwa, kunonoka ruoko basa, kudzokororazve uye nedzimwe nharaunda dziviriro mazano ekugadzira mararamiro akanaka egirini. Ichave zvakare inonyanya kukosha kuvandudza kwejira machira indasitiri mumakore mashoma anotevera. Kuda vatyairi.
Organic donje faibha
Pfungwa yakakosha: Organic donje imhando yakasarudzika yakasviba uye isina kusvibiswa donje. Mukugadzirwa kwekurima, manyowa mafetiraiza, kutonga kwehutachiona hwezvipembenene nezvirwere, uye manejimendi kurima manejimendi anonyanya kushandiswa. Zvigadzirwa zvemakemikari hazvitenderwe, uye kusvibiswa-kusununguka kunodiwa mukugadzira nekutenderera. ; Iine hunhu hwe ecology, girini uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Imwe ongororo inoratidza kuti kudyara kwehunhu kunodzikamisa kukanganiswa kwedonje pane zvakatipoteredza, zvichidaro kunobatsira kugadzirisa zvipenyu zvakasiyana uye hutano hwevhu, uye kudzora mishonga ine chepfu. Mhando dzakadai seH & M uye Uniqlo dzakaisa mari muzvirongwa zvekugadzira donje kuzadzisa zvinodiwa nevatengi "chirongwa chekuvandudza donje." Naizvozvo, organic organic machira akabatana neyakagadzikana machira kudyidzana.
Maitiro & Fibre: Organic donje fiber inorimwa nenzira chaiyo yechisikigo. Iyo organic base inofanira kuve iri munzvimbo isina mhepo, mvura uye ivhu zvisina kusvibiswa. Mucheka wakarukwa kubva kune organic kotoni ine kupenya kupenya, kupfava kwekunzwa ruoko uye kugona kwakasimba; ine yakasarudzika antibacterial uye deodorant zvimiro; inoderedza zviratidzo zvemaoko uye inonyanya kubatsira kutarisirwa kweganda. Inoshandiswa muzhizha uye inoita kuti vanhu vanzwe kunyanya kupora uye vakasununguka.
Zano rekushandisa: Organic donje fiber inokodzera micheka yechisikigo senge donje, rineni, sirika, nezvimwewo, uye inogona kushandiswa kune akasiyana mamiriro ezvinhu. Inoshanda mukusimudzirwa kwemarudzi ese ezvigadzirwa zvekusununguka, zveangu zvipfeko.
Natural yakasviba donje
Pfungwa yakakosha: Kwenguva yakareba, vanhu vaingoziva kuti donje rakanga rakachena. Muchokwadi, kotoni yemavara yakatovepo mune zvakasikwa. Ruvara rweiyi donje hunhu hwehupenyu, iyo inodzorwa nemajini majini uye inogona kupfuudzwa kune chinotevera chizvarwa. Natural coloni donje rudzi rutsva rwezvinhu zvemachira zvinoshandisa tekinoroji yazvino yekugadzira bioengineering kurima mhando nyowani yezvinhu zvemachira zvine mavara echisikigo kana donje rasvipwa. Zvigadzirwa zvine donje zvine mavara zvinoenderana nehutano hwevanhu; kuderedzwa kwemaitiro ekudhinda nekudhaya mumachira maitiro anogadzira iyo "green revolution" sirogani yakaiswa pamberi pevanhu, inoderedza kusvibiswa kwezvakatipoteredza, inobatsira nyika kuramba ichichengetedza chimiro chayo semutengesi mukuru wemachira, uye inoputsa iyo yepasi rose "green green ". Zvipingamupinyi ”.
Maitiro & Fibre: Inofananidzwa neyakajairika donje, inowedzera kusanaya kusanaya kwemvura, kusagadzikana kwezvipembenene, kunwa mvura uye kuiswa kwevarimi kwakaderera Natural mavara ekotoni tambo akapfupika uye anotetepa kupfuura mamwe manyowa macottons. Mhando dzemavara dzakaganhurirwa, dzimwe dzisingawanzo, uye goho rakaderera. Natural kotoni yemavara yakasviba-isina, inochengetedza simba uye haina chepfu. Ruvara rwekotoni runopa undyed yakasikwa tan, tsvuku, girini uye shava. Hainonoki uye ine kumwe kupokana nechiedza chezuva.
Zano rekushandisa: Yemhando yakasikwa organic fiber, inokodzera kuvandudza yeganda-inoshamwaridzika, inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isiri-yekudhaya zvipfeko zvemachira zvigadzirwa Harvest & Mill brand, iyo yakasarudzika dhizaini ye organic mavara donje yakasimwa, yakanatswa uye yakasonerwa muUnited States, uye yakashomeka edhisheni zvinhu zvekotoni zviri kushomeka.
Renewable organic kurima
Pfungwa yakakosha: Organic purazi inonyanya kureva kurimwa kwemichero nemiriwo pasina kutora chikamu kwemakemikari, nehutarisiro hwesainzi seyakajairwa uye yakasvibirira yakasvibira sechirevo. Ichi chiito chinogona kudzorera ivhu, kuchengetedza mhuka, kugadzirisa mvura uye kuwedzera zvipenyu zvakasiyana. Zvigadzirwa zvekurima zvekurima zvinozivikanwa pasi rese zvemhando yepamusoro, zvisiri-zvinosvibisa uye zvinogadzira zvigadzirwa. Naizvozvo, zvekurima zvekurima zvinogadziridzwa kuvandudza kukwikwidza kwezvigadzirwa zvemunyika yangu mumusika wepasi rose, kuwedzera basa rekumaruwa, mari yevarimi, uye kugadzirisa kugadzirwa kwekurima.
Crafts & Fibers: Patagonia, piyona mune inowedzerwazve kurima, kuburikidza nehurongwa hwayo hweROC, inoitisa zvakasikwa uye zvinopindirana faibha uye kuunganidzwa kwekudya, uye inoshanda pamwe nemapurazi anodarika zana nemakumi mashanu muIndia kuendesa michero yemicheka yefibhi yezvipfeko. Gadzira inogadziriswazve machira sisitimu inoenderana nekutarisirwa kwenzvimbo.
Zano rekushandisa: Oshadi inoshandisa chirongwa che "Kubva kuMbeu kusvika Kusona", icho chinotarisira kuvakazve kukwidziridza kurimwa kwedonje nemiti yedhayi yakasikwa. Batch yekutanga yemapfekero ekushandira ichave ichiwanikwa pamhepo uye pasina nguva munguva pfupi. Iyo Yakadzika Midzi Unganidzo yeWrangler brand ndiyo yekutanga nhevedzano yekubatanidza kumaruwa nechigadzirwa. Jeans nemaT-shirts anoiswa zita repurazi rekotoni.
Pfungwa yakakosha: Kudyara kwezvirimwa kunoreva nzira yekushandisa zvakasiyana zvirimwa zvine pigments zvinokura zvakasikwa muchisiko kutora pigments kudhaya izvo zvakavezwa zvinhu. Midzi mikuru yemichero yemiti ndeye turmeric, madder, rose, nettle, eucalyptus, uye maruva yeyero.
Maitiro & Fibre: Iyo pigment yemadhayi ezvirimwa inowanzo kuwanikwa muzvirimwa uye inogadziridzwa kuburikidza nehunyanzvi maitiro, uye zvinhu zvine mavara izvo zvinogara uye zvisina kupera. Iko kushandiswa kwekudyara kwezvirimwa hakugone chete kudzikisira kukuvara kwemadhayi kumuviri wemunhu uye kushandisa zvizere zviwanikwa zviitwazve, asi zvakare zvinoderedza zvakanyanya huturu hwekudhaya mvura yakasviba, iyo inobatsira kudzikisa mutoro wekurapa tsvina uye kuchengetedza nharaunda. .
Zano rekushandisa: Kudyara kwezvirimwa kune hukama hwakanaka hwefibisi yakasikwa. Ruvara rwemavara rwakazara pasilika, ruvara rwakajeka, uye kutsanya kwakanaka. Kechipiri, donje faibha, mvere dzemakwai, bamboo fiber uye modal zvinonyanya kukodzera; inoshanda zvakare kune dzimwe shinda dzakadzokororwa. Inokodzera kugadzirira-kupfeka uye zvipfeko zvevacheche nezvayo zvekushandisa, zvipfeko zvemukati, kupfeka kumba, mbatya dzemitambo, zvigadzirwa zvemachira epamba, nezvimwe.
Pfungwa yakakosha: Nekusava nechokwadi kwemamiriro epasi rose ehupfumi, wechipiri-ruoko musika wekutengesa uye hunyanzvi hwe DIY zvave kuwedzera, uye kushandiswa kwe zero zero pfungwa inoratidza mweya werusununguko yakazvarwa, ichidetemesa dingindira rehunyanzvi uye inononoka fashoni. Yakatsvakwa zvakadzama nevatengi.
Crafts & Fibers: Nekushandisa aripo emicheka machira, zvinhu uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu kupa kutamba kune zvitsva kukurudzira, kuruka, kusona, kusona nehumwe hunyanzvi zvinoshandiswa kugadzira itsva yakasarudzika uye retro ruoko-yakarukwa ruoko.
Zano rekushandisa: Chigadzirwa chakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvemaoko, mabhegi, zvipfeko uye zvigadzirwa zvemumba.
Pfungwa yakakosha: Sekutsvagurudza, 73% yenguvo mupasi rose dzinopedzisira dzave mumarara, isingasviki 15% yadzokororwazve uye 1% inoshandiswa pambatya nyowani. Parizvino, donje rakawanda rinogadziriswazve nemishini, yakarongedzwa neruvara, yakatemwa kuita mhandara fiber uye yakadhayiwa kuita shinda nyowani. Kune zvakare chikamu chidiki cheiyo nzira yekushanduka kwemakemikari yedonje kuti ibatsire kuona kutenderera. Izvi zvinogona kudzora kukanganisa kwezvakatipoteredza kwekudyara kwemhandara yekotoni, kudzikisa kutemwa kwemiti, tsvina yemvura uye kugadzirwa kwe carbon dioxide.
Maitiro & Fibre: Iyo yakadzoreredzwa yemachira kukwidziridzwa uye marara system inogona kudzokororazve huwandu hwakawanda hwemaindasitiri donje marara kubva kune epasirese zvigadzirwa uye vatengesi, kuburikidza nemawoko uye laser kupatsanura, uye kuishandura iyo kuita inoenderana yekushandisa zvakare shinda yezvinhu.
Zano rekushandisa: Kudzokorodza kune mukana wekuwedzera mune pfupi pfupi, uye machira emachira matsva anotsigira kuteverwa uye kushandiswazve. Chigadzirwa chacho chakakodzera kuruka, juzi, denim uye mamwe masitaera.